Buugaag carruureed ku aaddan Ma xishoonayaan? - Nationellt kompetenscentrum anhöriga
BillawMawduucMa xishoonayaan?Buugaag carruureed ku aaddan Ma xishoonayaan?
Buugaag carruureed ku aaddan Ma xishoonayaan?
Boggani wuxuu jiraa oo keliya isagoo swiidhish ah
Waxaa ugu dambeynti 2018-01-08 cusbooneysiiyay wermeling, soo saaraha mas’uulka ah Opratat
Ma sheegayo sida aan dareemayo
Mar walba caawimaad ayaan u baahanahay
Dareenka dadka kale ayaan xil iska saarayaa
Ma dhiman doonyaa?
Loogu tala galay dad waaweyn